Hasin’ny 29 Marsa – MyDago.com aime Madagascar
Hasin’ny 29 Marsa
Inty no voarainay teto amin’i MyDago, ka atolotray anao mpamaky. Hisaorana i Raveloson Constant nandefa azy.
Eritreritra 29 marsa : « Fitiavan-Tanindrazana » ?
Hetsika Fanasin’ny Tany sy nny Fanjakana
Fahamedrehana sy fanajana no tandrify ny andro 29 mars.
Amin’ny olona izay manam-panahy henatra dia lavitra ny piliavava sy ny fisehoana ivelany ny 29 marsa. Mitsara sy mampitaha avy hatrany mantsy ny tantara.
Koa eritreritra eritreritra tsy mandry no mampanao tonom-bola entina midedaka amin’ireo akanga sisa nanaborana. Tsy voadion’izany akory ny otafady nataon’ny mpamadika tato anatin’ny roa taona.
Misy ireo niaina mivantana tamin’ny 1947 no hiondrika amin’ny fahatsiarovana, fifadian-kanina sy fisaonana. Anjara fanajana izay.
Ny taranaka velona ankehitriny sy izay hifandimby kosa hanovo hery amin’ny hevi-dalin’ny 29 mars hoenti-miarina manafaka ny androany ary manorina ny ampitso.
Azo itarafana ny ankehitriny ny hevi-dalin’ny 29 marsa 1947. Ho hasin’ny tany sy ny fanjakana eto amin’ity Madagasikara ity no ady masina niainga tamin’ny 29 mars 1947.
Ny fambaboan-dry Galliéni ny fanjakana tamin’ny basy aman-tafondro no rangory fototry ny ota. Kirizy hatramin’ny 1896, tsy vita 1947.
Mivarotra tanindrazana ny Taranak’i Galliéni Gasy – Vazaha. Manompo an’i Frantsa ka manao hena an-tànan-tsaka an’i Madagasikara giazana tsy hivelatra anivon’ny firenena maneran-tany.
Mandrafy sy mifofo ny ankolafy tia tanindrazana ka ailika an-tsesitany ny mpitarika ankolafy tia tanindrazana (Raseta, Ravoahangy, Rabemananjara). Tsy tafody raha tsy sitrapon’ny Taranak’i Galliéni Gasy-Vazaha.
Fitondrana hosoka misoloky ny feon’ny Malagasy no mampanjaka milisy, fisamborana, herisetra sy fampijaliana am-ponja, famonoana, hamoretana ny teto an-toerana.
Anjara fanajantsika ankehitriny kosa ny mihetsika manangana indray izay nilofosan’ny 29 marsa 1947 dia ny Fanjakana Malagasy manana ny hasiny amin’izao tontolo izao.
Mampody ny mpitarika ankolafy an-tsesitany,
Manangana fitondrana tetezamita tsy misy fisolokiana, iaraha-manana fa izay no repoblika ary hampanao tenierana tena ankatoavin’ny rehetra fa izay no demokrasia.
Fahamendrehana anatrehan’ny 29 marsa 1947 ny mampandamoka hatrany hatrany ny fitondrana misoloky, misora-tena ho tetezamita, tapi-dàlan-kaleha mampidi-kizo an’i Madagasikara anatrehan’izao tontolo izao.
Izay no hasin’ny 29 marsa, hasin’ny tany sy ny fanjakana.
Auteur Laurenço MarquesPublié le 27 mars 2011 27 mars 2011 Catégories Malagasy, Négos, PolitiqueÉtiquettes 29 mars
3 réflexions sur « Hasin’ny 29 Marsa »
o leity é, mba aza mirediredy ato intsony ianareo fa efa misokatra maso daholo ny mason’ny olona ankehitriny é. Tia tanindrazana hoe ny ankolafy? Ankolafy iza? Ataovy kely ny jeritodika: Ny ankolafy telo ve? Tamin’ny 1972 – MARS 2009 ireo ankolafy telo ireo ihany no nitondra. Taiza ho aiza ny toeran’ny Madagascar? F’angah paradisa ve i Mada, sa firenen-dehibe? Tsy roa taona no nampahantra i Mada fa efapolo taona. Amboaro ny fomba fijery leisy heveriko fa olona nianatra daholo isika é. Hita fa sesi-tany sahala @ Dadan’ialahy koa ialahy. Mahereza é
Raha ny analizin’ilay RADO no arahina, dia na : Mitolona arak’izay tokony ho izy, izay mazoto, na aoka tonga dia varotana sy atao departemanta frantsay ny TANINDRAZANA !
Tsy hoe rehefa manta vary, dia handevin-tsodrobe !
TSY VOATERY HOE NIANATRA, VAO MAHAFANTATRA HOE IZA NO RANGORO FOTOTRY NY AFO !!! NA IZANY AZA, TSY EKENA FOTSINY IZAO NY MANONGAM-PANJAKANA !!! RAHA HO TANISANA ETO DAHOLO NY ANARAN’IREO NIKOTROKA SY NATAO SORONA NA MPANAN-TANTERAKA, DIA HO ANTITRA ETO DAHOLO !
LAVO NY FIRENENA, ARY MILA NY FINIAVAN’NY REHETRA NY MANARIN’AZY !
Masina ny tanindrazana ! Tsy tokony ho viravirain’ny mpivaro-tanindrazana na ireo tia kely !
29 mars 2011 à 7 h 45 min
Firy taona moa ilay Rado tamin’ny 1972? Iza no nanakendan’ny fitondran’i Ramanantsoa? Iza no namono an’i Colonel Ratsimandrava dia i Ratsiraka no nosoketaina? Iza no nampijaly ny vahoaka nanomboka ny 1975, ary nanakenda an’i Ratsiraka mba hanompo azy? Iza no naniraka an’izy mivady mody natao hoe mpanao T-Sheert, nefa nalefa hanala an’i Ratsiraka tamin’ny fitondrana ny 2002? Ary iza no nikotrika ka nanao izay hanalana an’i Ravalomanana teo amin’ny fitondrana ka manohana sy miaro ny Putchistes? Valiny: Frantsay – Ratsirahonana – ilay Karana manankarena indrindra eto Dago. ARY IZA NO NIVAROTRA SY MIVAROTRA MADAGASIKARA HATRAMIN’NY 1947? NY PADESM SY NY TARANANY IZAY PUTCHIST. MIONDRIKA EO HANATREHAN’IREO MPITOLONA VOAFITAKA TAMIN’NY 1947 NY TENAKO.
Précédent Article précédent : Innocents, pourtant dépouillés de leurs droits (en Français, Malagasy & English)
Suivant Article suivant : Une fin de mois décisive !